Radio Kathmandu | अर्थ
९ जेठ, काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच रेमिटेन्स सेवा सुरु भएको छ। सम्झौता पश्चात् सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरबाट आउने सम्पूर्ण विदेशी तथा स्वदेशी रेमिटान्स, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सम्पूर्ण शाखाबाट सहज रुपले ग्राहकहरुले प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यस सम्झौता मार्फत सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका ग्राहकवर्गहरुले सहज र सुलभ तरिकाले...
२६ कम्पनीलाई कर तिर्न ७ दिने अल्टिमेटम
६ जेठ, काठमाडौं । निलम्बित सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनसहित २६ कम्पनीलाई कर तिर्न मध्यमस्तरीय कर कार्यालयले अल्टिमेटम दिएको छ । फोन सम्पर्क, पत्राचार, इमेल गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै कर कार्यालय ति कम्पनीहरुलाई ७ दिन भित्र कर तिर्न अल्टिमेट दिएको हो । बक्यौता कर दाखिला गर्न र दाखिला भएकोर भए प्रमाण पेश गर्न...
एसियाका १३ मुद्राहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर बन्याे पाकिस्तानी रुपैयाँ
५ जेठ, एजेन्सि । प्रतिष्ठित आर्थिक समाचार पोर्टल ब्लूमबर्गले पाकिस्तानी रुपैयाँ एसियाकै सबैभन्दा कमजोर मुद्रा बन्न पुगेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष पाकिस्तानी रुपैयाँमा २० प्रतिशत भन्दा बढि गिरावट आएका कारण यो एसियाका १३ मुद्राहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर मुद्रा बन्न पुगेको हो। पाकिस्तानी पत्रिका जंगमा प्रकाशित एउटा समाचार अनुसार मे महिनामा मात्र पाकिस्तानी रुपैयाँमा २९...
आजकाे सुनचाँदीकाे मुल्य यस्ताे छ
५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन तोलामा ६० हजार २०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आइतबार तोलामा रु २०० घटेर ६० हजारमा कारोबार भइरहेको हो। यस्तै तेजावी सुन तोलामा ५९ हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी भने तोलामा रु ७१० मा कारोबार भएको...
२९ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजनीतिक आग्रहबाट संचालित भएको भन्दै अबका दिनमा त्यस्तो व्यवहार नदेखाउन सुझाव दिएका छन। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै कार्कीले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई...
बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो सरकारकाे बजेटकाे प्राथमिकता-डा. भट्टराई
२९ वैशाख, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताएका छन। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री स्वयमले आफैँमाथि न्याय...
२० वैशाख, काठमाडाैं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिको घोषणा गरेको छ । सामान्यतः यस्तो घोषणा बजेटमार्फत हुन्छ । तर, वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी घोषणाका कारण दबावमा परेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ...
१९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेल/मटितेलको मूल्य बढाएको छ । हवाई ईन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको हकमा खुद्रा विक्री मूल्य यथावत राखिएको छ । पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा बढाइएको छ भने डिजेल र मटितेलमा १/१ रुपैयाँ भाउ बढेको छ । शुक्रबार राती १२ बजेबाट बढेको मूल्य लागू हुनेछ ।...
एनसेलबाट कर असुल्न विद्यार्थी संगठनको माग (विज्ञप्तिसहित)
१२ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न विद्यार्थी संगठनले एनसेलबाट कर उठाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । एनसेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वाइसीएल नेपाल,अनेरास्वियु,युवासंघ नेपाल र अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी)विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका हुन्। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसललाई...
123 … 34 Next>